I-J & J's Thola indlela - I-Airbnb
I-J & J's Thola indlela
Rindge, New Hampshire, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Jose
Kungani uhlale ekamelweni elilodwa kuyilapho ungaba nefulethi lonke ngenani elifanayo? Woza ujabulele ukuthula nokuthula efulethini lakho eliyi-2 Bdrm elilala 4 futhi linikeza ikhishi eligcwele, indawo yokugeza yangasese, igumbi lokuhlala, i-patio yangaphandle yangasese kanye nokungena kwangasese.
Siseduze nemizila yokuhamba izintaba neyokuhamba ngebhayisikili, amachibi amaningi namachibi kanye nemizuzu nje ukusuka eFranklin Pierce University, Mt. Monadnock, Mt. Watatic, & Mt Wachusett. I-Keene State nayo ingaphansi nje kwemizuzu engama-40 yokushayela.
Indawo yokupaka izimoto ezimbili. Ileveli eyodwa yokuhlala nesitofu, i-microwave nesiqandisi. Sinikeza ama-cereal bar kanye ne-oatmeal esheshayo kanye nekhofi, itiye noshokoledi oshisayo.
4.91 · 129 okushiwo abanye
Jabulela ukuhamba ngezinyawo noma ukugibela ibhayisikili eMonadnock Branch-Trail. Umzila uhamba ibanga elingaphezudlwana kwamamayela ayi-7 ukusuka kuWebster Street eJaffrey eduze nenkundla yebhola uya emngceleni waseNew Hampshire-Massachusetts.
I-Mt Watatic, e-Ashburnham eseduze, MA ilungele abasanda kufunda. I-Mt Monadnock ingenye intaba eseduze, futhi iwuhambo olunzima kakhulu. Zombili izintaba zinikeza imibono emangalisayo esiqongweni.
Singumbhangqwana onobungane ojabulela ukuhlangana nabantu abasha, kodwa futhi siyayihlonipha imfihlo yabanye. Sihlala sitholakala uma udinga ukuxhumana nathi.
Hlola ezinye izinketho ezise- Rindge namaphethelo